Ejipta: Nidal Hassan – Mpitsabo Aretin-tsaina sa Marary Saina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2018 14:57 GMT
(Fanamarihana lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 2009)
Mpitsabo aretin-tsaina ao amin'ny tafika Amerikana izay teratany Arabo ny Major Nidal Hassan izay nanao ilay fitifirana faobe tao Fort Hood tao Texas, namonoany miaramila 12 ary olontsotra iray. Miatrika fiampangana mikasika vonoolona nokasaina izy ankehitriny. ”Mpitsabo Aretin-tsaina sa Marary Saina?”, hoy ireo blaogera Ejiptiana manontany.
Miombom-po aminy i Nawara Negm:
Mety naheno tantara mampivarahontsana avy tamin'ireo miaramila niverina avy tany Iraka angamba izy; ireo miaramila ireo izay namono vehivavy sy ankizy tsy nitàm-piadiana. Naniry ny hiala tao amin'ny tafika izy kanefa nolavina ny fangatahany. Tonga hatramin'ny fametrahana fitarainana mba hahafahana miala amin'ny asany mihitsy aza izy ary, ho valin'izany, nolazaina izy fa ho alefa any Iraka.
Mihevitra azy ho marary saina i Hassan El Helali :
Noho ity hadalàna ity, tsy maintsy hanaporofo indray mandritra ny volana maro ary mety aman-taonany maro mihitsy aza, hoe tsy mamitaka ary mifandray tsara amin'ny fiarahamonina mampiantrano azy ireo Arabo sy Miozolomana mipetraka any Andrefana hatramin'ny nahenoana indray fa nisy nanapoaka tena teny anivon'ny olontsotra ny iray tamin'ireo adala ireo. Noho ity jiolahy ity, ho lavina ny ankamaroan'ireo fahazoandàlana hiditra any amin'ny firenena mandroso; na ho an'ny raharaham-barotra izany, na ho an'ny fahafinaretana, fianarana, na resaka fahasalamana. Noho izy, ho voampanga amin'ny fampihorohoroana, herisetra, famitahana ary manaikitra ny tànana namahana azy avokoa ireo Arabo sy Miozolomana rehetra any Andrefana – mandra-panapoforo ny mifanohitra amin'izany.
Te-hampahatsiahy ny rehetra i Wael Nawara hoe:
Tany amin'ny faran'ny Jona 2007, nijoro teo alohan'ireo mpanaramaso azy Atoa. Hasan ary teo anoloan'ny mpikambana 25 amin'ny ekipan'ny fahasalamana ara-tsaina sady nanao famelabelarana mikasika ny finoana Silamo, mpanao vy very ny aina miaraka aminà baomba sy fandrahonana mety ho atrehan'ireo miaramila miozolmana momba ny ady any amin'ny firenena Miozolomana ao Iraka sy Afghanistana, araka ny dikan'ilay famelabelarana azo avy tamin'ny The Washington Post.
”Mihasarotra hatrany hatrany ho an'ireo miaramila Miozolomana ny hanamarina ara-moraly ny filatsahany amin'ny tafika izay matetika mifanandrina amin'ny Miozolomana hafa”, hoy izy tao anatin'ny famelabelarany.
Mitanisa fehezanteny an-gazety iray ilay Libaney Dr Asa'ad Abu Khalil – The Angry Arab – mipetraka ao Amerika, izay miteny hoe:
”Rehefa mitifitra biraon'ny polisy iray ny lehilahy fotsy iray, antsoin-dry zareo ho fandefasana taratasy amin'ny paositra izany,” hoy i Victor Benjamin II, 30 taona, mpikambana taloha tao amin'ny Tafika.” Fa rehefa manao izany ny Miozolomana, antsoin-dry hoe jihady.”
Ary niezaka ny tsy hanoratra mikasika izany ilay Ejiptiana SandMonkey satria:
Ho toy ny hevi-diso nasisika an-tery avokoa izay rehetra eritreretiko. Ny tiako tenenina dia hoe, Arabo, Miozolomana ary Palestianana ilay [nitifitra]. Inona no azo lazaina amin'izany? Hoe tranga mitokana ve izany? Mety tsy hitranga intsony? Tsy midika izany fa tsy hanao hetsika toy izany intsony ve ireo Arabo na Miozolomana rehetra ao anatin'ny tafika? Marina ve? Mila milaza izany ve aho? Inona no mila lazaina eto?
Zavatra roa ihany no tena afaka eritreretiko raha ny marina: 1) Mirary fiononana feno ho an'ireo fianakavian'ny niharam-boina, ary 2) amin'ny anaran'ireo Arabo sy Miozolomana rehetra izay ho voaompa noho ny hetsika nataonao: manantena aho fa tsy hankafy intsony andro iray hiadanana eto amin'ity fiainana ity na ny amin'ny manaraka ianao!